Kuyabheda emaphoyiseni aseKhayelitsha | isiZulu
Kuyabheda emaphoyiseni aseKhayelitsha
Iphoyisa libhekene namacala angu-15 okudlwengula
I-IPID iphenya ngesihluku samaphoyisa
Iphoyisa livele enkantolo ngelokudlwengula
Cape Town - Umbiko okhishwe ngamaphoyisa aseKhayelitsha, eKapa, uthi lo mbutho usufana nofile njengoba kunezinga eliphezulu lokungaziphathi kahle kwabasebenzi, ukuphutha emsebenzini kanye nokungaphenywa ngendlela kwamacala abantu.
Umbiko uthi esikhathini esiyizinyanga ezingu-14, bangu-78 abantu asebebulewe, lesi sibalo siphindeke kane kuleso esikade sihlawumbiselwa.
Bangu-656 abasebenzi eziteshini ezintathu ezikhona, esikhathini esingunyaka, zingu-701 izikhathi, abasebenzi abathize bebizelwa ngaphamnbi kwekomidi lokuqondisa izigwegwe, laba basebenzi bahlanganisa namaphoyisa asezikhundleni.
Umbiko uqhubeke waveza ukuthi kukhona ababoshwa baphinde badedelwe bengakaze bathweswe amacala, kunjalo izitatimende zofakazi kanye nabamangali azibhalwa phansi.
Konke lokhu kuvezwe yithimba elaqokwa nguKhomishana wamaPhoyisa kuzwelonke uRiya Phiyega, owacela ukuthi kuphenywe amaphoyisa aseKhayelitsha, kulandela imibiko ethi kukhona ukungaboni ngasolinye phakathi kwawo nomphakathi.
NoNdunankulu waseWestern Cape uHelen Zille naye ubefuna kube nalolu phenyo, nolugcine ngokumiswa.